Onye na -emepụta China Pepper Grinder Coffee Grinder Ceramic Grinding Core emepụta na ndị na -eweta ya Trimill
A na -eji ihe na -adịghị ahụkebe seramiiki seramiiki eme alumina nke na -agbaze na okpomọkụ karịa 1300 Celsius. Njirimara pụrụ iche nke ihe ndị ahụ na -eme cores na -egweri seramiiki nwere njiri mara nke ike siri ike, na -eyi mgbochi, mgbaze ọkụ ngwa ngwa, nguzogide corrosion, nchekwa na nchedo gburugburu ebe obibi, zuru oke maka ntụpọ nke rọba ma ọ bụ igwe na -egweri ọla. E wezụga nke ahụ, arụmọrụ seramiiki na -egweri ihe siri ike ma dịkwa ọnụ ala, yabụ ahịa na -ejikarị ya eme ihe.
Ogo arụmọrụ nke seramiiki egweri isi
1. High ekweghị ekwe, ezi eyi eguzogide
E jiri ya tụnyere isi ike nke isi plastik na-erughị 60HRA na igwe anaghị agba nchara 70-78HRA, isi ike nke seramiiki nwere ike iru 80-85HRA, ngwaahịa a na-adị mfe iyi, arụmọrụ egweri na-akwụsi ike, yana iji ya ka mma .
2. Ọ dịghị mfe iduzi okpomọkụ
Isi ihe na -egwe ọka nke igwe nri ga -ewepụta okpomọkụ n'oge a na -egwe ihe. E jiri ya tụnyere igwe ma ọ bụ plastik na -egwe ihe, isi seramiiki na -egwe ihe agaghị emepụta oke okpomọkụ n'ihi njirimara nke ikpo ọkụ, nke na -agaghị emetụta ụtọ anụ ahụ nke ihe ndị ahụ.
3. Ịsa ahụ, iguzogide corrosion
Enwere ike idobe isi seramiiki na oke okpomọkụ ma ọ bụ gburugburu iru mmiri, ọ bụghị emebi emebi, ọ bụghị nchara, iji hụ na nchekwa na ahụike nke ihe eji eme ya.
4. Ọnụ ala
Ngwa ihe eji eme ihe juputara na akụrụngwa, teknụzụ tozuru oke na kwụsiri ike, ọnụ ahịa ngwaahịa dị ala, yana uru asọmpi doro anya.
Ụdị na ngwa nke seramiiki cores cores
A na -ekekarị ngwaahịa seramiiki na -egweri ihe n'ime ụdị conical na ewepụghị. A na -eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ụdị akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ igwe eletriki eletriki n'ime ezinụlọ, nke a na -ejikarị eghe kọfị, nnu mmiri, ose na ngwa nri ndị ọzọ na obere mkpụrụ osisi dị iche iche, ọ bụwo ngwa ọrụ kichin dị mkpa maka ezinụlọ.
Nke gara aga: Nnukwu ụlọ ọrụ 100ml nnu nnu na ose ose
Osote: Nnukwu batrị eletriki nnu na ose igwe ESP-1
Ọkachamara emeputa N'ihi iche iche nha O ...